‘भाषा, साहित्य, कला संगीत कुनै जाति विशेषले नै निर्माण गर्छन्’ –रामकर राई - Naya Online
‘भाषा, साहित्य, कला संगीत कुनै जाति विशेषले नै निर्माण गर्छन्’ –रामकर राई
आइतवार, मंसिर २१, २०७७ (December 6th, 2020 at 11:09am ) अन्तर्वार्ता
किरात राई साँस्कृतिक कलाकार संघ
विगतका वर्षहरूमा किराँत राई साँस्कृतिक कलाकार संघले खुलेआम आमनेसामने भएर गर्ने यलम्बर संगीत प्रतियोगिता यो वर्ष कोभिड १९ का कारण अनलाइनमार्फत यलम्बर अनलाइन संगीत प्रतियोगिता (यलम्बर आइडल)को आयोजना गर्यो । जुन प्रतियोगिताले अहिले सामाजिक सञ्जाल तताएको छ भने प्रतियोगितामा सहभागि हुने देशहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ । १० देशका प्रतियोगिहरूले सहभागिता जनाएको यो प्रतियोगिता अहिले निक्कै लोकप्रिय बनेको छ । सो प्रतियोगिता अहिले फाइनल चरणमा पुगेको छ । सोही प्रतियोगिताको सेरोफेरोमा रहेर आयोजक किरात राई साँस्कृतिक कलाकार संघका केन्द्रिय अध्यक्ष रामकर राई ज्युसँग नयाँ अनलाइनले गरेको कुराकानी सार अंश ।
अहिले यलम्बर सङ्गीत प्रतियोगिता कुन राउण्डमा पुग्यो ?
असोज १७ बाट पहिलो चरणको छनौट प्रकृया सुरुवात गर्यौं । पहिलो चरणको छनौटमा सहभागि २१३ जनाबाट उत्कृष्ट ५० जनालाई छनौट गर्यौ । त्यस पछि उत्कृष्ट ३०, २० र १० को छनौट गरिसकेका छौं । अहिले हामी चौथो चरण सम्पन्न गरि फाइनल राउण्डका लागि तयारीमा छौं । फाइनल राउण्ड यही मंसिर २७ गते हुदैछ ।
यो प्रतियोगिता खास किन र के का लागि ?
यो प्रतियोगिताको बारेमा भन्न लागियो भने त मुन्धुम जस्तै अनेकौं कथा र मिथकका पलटहरू झैं बन्ला तर समग्रमा भन्नु पर्दा किराती मौलिक गीत संगीतलाई संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्नका लागि हो । हाम्रा यी गीत संगीतहरू साँस्कृतिक जागरण किसिमका छन् । गीत संगीतको माध्यमद्वारा साँस्कृतिक जागरण ल्याउने, हाम्रा समुदायलाई साँस्कृतिक चेतना जगाउने र हामीले अङ्गालेका आचरण, व्यवहार, मूल्य र मान्यतामा भएका विकृति र विसंगतीलाई खुट्याउँदै, चिर्दै हामी सम्पुर्ण साँस्कृतिक कलाकारहरू एक हुँदै, हामी साँस्कृतिक यात्रामा छौं । यसै यात्राको एउटा रूप यलमबर संगीत प्रतियोगिता हो ।
सहभागिहरू आफुलाई के भनिरहेका छन् ?
१० वटा राष्ट्रबाट सहभागि हाम्रा यी साँस्कृतिक कलाकारहरू हाम्रा मुद्धाहरूमा उत्साहका साथ जोडिएका छन् । प्रत्येक चरण पार गरिसकेपछि हामीले हाम्रा साँस्कृतिक, राजनैतीक, वैचारिक विषयहरूमा हामीले त्यस क्षेत्रसँग विज्ञ व्यक्तित्वहरूबाट प्रशिक्षण गराउँदै आएका छौं । जसका कारणले हाम्रा प्रतियोगिहरू उत्साहित छन् । प्रतियोगिताबाट छनौटमा नपरेका प्रतियोगिहरू पनि एकदमै सकारात्मक छन् । प्रत्येक चरणमा वहाँहरूको चासो र चिन्ता छ । जसले यो सम्मानित, गरिमापूर्ण उपाधि प्राप्त गरे पनि हाम्रै मुद्धामा केन्द्रित गीत संगीतले उपाधि प्राप्त गर्छन् भन्ने कुरामा प्रतियोगिहरू स्पष्ट छन् । जुन यस संस्थाको लागि ठूलो सफलता हो ।
यो प्रतियोगिताले हाम्रो कला र मौलिक संस्कृतिलाई कसरी टेवा पुर्याउन सक्ला ?
हाम्रा गीत संगीतहरू मौलिक छन् यसमा कुनै दुविधा छैन । तर हाम्रा आँखा, कानहरू मौलिक गीत संगीतमा रमाउने कुरामा अभ्यस्त भइसकेका छैनन् । गीत संगीतहरू लोपोन्मुख हुने अवस्थामा छन् । विश्वव्यापिकरणले विश्वलाई खर्लप्पै निलेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रा सचेत युवा कलाकारहरू साँस्कृतिक अभियानताहरू मौलिक गीत संगीतको खोजीमा अहोरात्र खटेका छन् । यो सकारात्मक कार्यले नेपालको मौलिक गीत संगीतको पहिचान खुल्न सक्छ ।
केही केहीले सङ्गीत पनि जाति विशेष हुन्छ र भनिरहेका छन् नि ?
जाति विशेष भन्ने शब्दले केलाई इङ्गित गर्नु भएको हो ? गीत संगीतको सिर्जना कुनै विशेष जाति, क्षेत्र, वर्ग, धर्मविशेष नै निर्माण हुन्छन् । ती गीत संगीतलाई राज्यको मुलधारमा पु¥याउने, राष्ट्रिय मूलधारमा पु¥याउने कि त्यसलाई बेवास्ता गर्ने भन्ने कुरा चाहीं राज्यले अपनाएको नीतिमा भर पर्छ तसर्थ किराती गीत संगीतको सन्दर्भमा पनि यस्तै अवस्था हो । किराती गीत संगीतलाई राज्यले कहिल्यै नेपाली गीत संगीतको मुलप्रवाहमा पु¥याउन सकेन साथै नेपाली विशुद्ध मौलिक गीत संगीत किराती गीत संगीत हो भन्ने कुरालाई वास्ता गरेन र आत्मसात गर्न सकेन । फलतः यो गीत संगीतलाई जाति विशेषको उपमा दिइरहेका छन् । भाषा, साहित्य,कला संगीत कुनै जाति विशेषले नै निर्माण गर्छन् तर जब राज्यले त्यसलाई राज्यको मुल प्रवाहमा पु¥याउने नीति ल्याउँछ तब मात्र एक जातिको मात्र अपनत्व र सम्पत्ति हुदैन, त्यतिबेला त्यो राष्ट्रिय बन्न जान्छ र राज्यले त्यसको अपनत्व लिने गदर्छ ।
विजेताहरूले के के प्राप्त गर्नेछन् ?
यो प्रतियोगिता आफैमा विशिष्ट छदैछ । त्योसँगै नगद परस्कार तथा केही उपहारहरू छन् । प्रथम हुने प्रतियोगिले ट्रफी र प्रमाण पत्रका साथमा नाछिरीङ कन्ट्रक्सनले सौजन्य गरेको रु. ३० हजार र किरात राई यायोक्खा हङकङले आयोजना गर्ने हङकङमा हुने यलम्बर साँझमा टुर गर्नेछन् । यस्तै दोश्रो पुरस्कार ट्रफी र प्रमाण पत्रका साथमा रु. १५ हजार प्रप्त गर्नेछन् । यसको सौजन्य किरात राई यायोक्खा हङकङले गरेको छ भने एउटा किराती गीत रेकर्डको अवसर पनि प्रदान गरिएको छ । यसको सौजन्य पृथक रेकर्डिङ स्टुडियो र किरात राई चाम्लिङ खाम्बातिम ललितपुरका अध्यक्ष जय राई ज्युले गर्नु भएको छ । तेश्रो हुने प्रतियोगिले ट्रफी र प्रमाण पत्रका साथमा रु. १० हजार प्राप्त गर्नेछ । यसको सौजन्य किरात राई यायोक्खा युएईका निवर्तमान अध्यक्ष मुम्चे राई ‘विद्रोही साइँला’ले गर्नु भएको छ । यस्तै उत्कृष्ट दर्षक छनोटमा पर्नुहुने प्रतियोगिले रु ५ हजार प्राप्त गर्ने छ । जसको सौजन्य आवेश अगुवा लिम्बुले गर्नु भएको छ । भने उत्कृष्ट १० मा पर्नुहुने प्रमाण पत्र, ट्रफी र २=२ हजार प्रदान गर्ने छौं । यसको सौजन्य चाहीं हेमराज राईले गर्नुहुने भएको छ । यसरी यो प्रतियोगितालाई तामझाम र विशिष्ट बनाउन सबैतिर बाट सहयोग गरिरहनु भएको छ । यो मानेमा यो प्रतियोगिता आयोजना गर्न पाउनु अहो भाग्य जस्तै ठानेका छौँ ।
प्रस्तुतिः प्रकाश दिप्साली राई
‘लय र भाव गजलरूपी शरीरका दुईटा आँखा हुन्’ -श्रीजन श्री
विगत दुई दशकदेखि नेपाली साहित्यमा समर्पित स्रष्टाको नाम हो ‘श्रीजन श्री’ । नेपाली गजलको...
‘साहित्य सिर्जना र लेखन भनेको पथ प्रर्दशक नै हो’ -नेत्रप्रसाद काफ्ले
नेत्रप्रसाद काफ्ले। धरान उप महानगरपालिका वार्ड नम्बर १३ का वडाअध्यक्ष हुन् । सदा आफुलाई...
विखण्डन भएको समाजलाई एकिकृत गर्नुपर्ने जरुरी ठानेकी छु -भवानी तिवारी
धादिङ जिल्लाको मैदीगाउँमा जन्मिएकी भवानी तिवारी गैरआवासीय नेपाली संस्था (एनआरएनए) अष्ट्रियाको महासचिव छिन् ।...
‘हालिमुहाली चै गरिनँ, पार्टीले दिएको जिम्मेवारी पुरा गरेँ’ -अइन्द्रसुन्दर नेम्बाङ
अइन्द्रसुन्दर नेम्बाङ नेपाल कम्युष्टि पार्टी एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन् । विद्यार्थी राजनीतिबाट अगाडि आएका...